Mafanafana amin’ny mangatsiaka | NewsMada
Mafanafana amin’ny mangatsiaka
Par Taratra sur 08/04/2021
Mbola resaka momba ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ihany: tsy maintsy atrehina, tsy azo odian-tsy hita. Mafanafana ratsy ny raharaha amin’izao: tsy mitsaha-mitombo, ohatra, ny isan’ny tranga vaovao amin’ny fitondrana tsimokaretina Coronavirus, ny marary ao anatin’ny fahasarotana, ny marary mamoy ny ainy…
Maro ny antony mety hahatonga izany: ny karazana Covid-19 afrikanina tatsimo mahery vaika, ny tsy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Eo koa ny fidirana miandalana amin’ny vanim-potoana mangatsiaka. Efa somary mamirifiry, ohatra, ny hatsiaka ny maraina sy ny hariva, na migaingaina sy manempotra aza amin’ny antoandro.
Inona ny ndeha hisaintsainana sahady izay vanim-potoana ririnina any? Ny amin’izao fotoana izao aza, sarotra sy manahirana. Nefa ilaina hatrany ny mitsinjo mialoha izay mety hitranga. Tsy ny tsy fitsinjovana mialoha izay mety hiseho ve, ohatra, sanatria, no anisan’ny mety ho nahatongavana amin’izao valanaretina andiany faharoa izao?
Na ahoana na ahoana, mba tsy hanampoka na hampikoropaka hatrany izay mitranga sy atao. Ilaina amin’izay ny mijery lavitra. Nahoana? Tsy ho vetivety izao ady lehibe maneran-tany amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao. Tsy vitan’izany, tsy fantatra be ihany izay mbola hitranga amin’ny fivoaran’ny aretina sy ny ady atao.
Mahery vaika ny fisehon’ny valanaretina Covid-19 andiany faharoa na ny karazana afrikanina tatsimo amin’izao. Tsy nampoizina? Na niomanana… Sanatria, hihamahery vaika koa izany amin’izao fidirana miandalana amin’ny vanim-potoana mangatsiaka izao? Ny hamisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa. Hitandremana sy hiambenana koa…
Araka izany, mila hamafisina sy ampitomboana ny fiarovan-tena amin’ny fiatrehana ny ady amin’ny fihanak’io areti-mandoza io: tsy mbola vita ny ady, tsy ho vetivety. Mety mbola hihamafy aza amin’izay hoe fidirana amin’ny vanim-potoana ririnina izay. Mafanafana amin’ny mangatsiaka ny raharaha? Tsy misy toy ny malina ihany…